Fahafaha-mivarotra ny Covid Organics Mbola fahazoan-dàlana vonjimaika hatreto
Maro ireo dingana arahina hamadihana ny tambavy ho lasa fanafody, araka ny fanazavan’ny Pr Rafatro.
Voalohany dia ny fikarohana ireo raki-tsoratra siantifika mikasika ny tombotsoa mety ho azy sy ny zavatra mety hatahorana momba ilay akora namboarina avy amin'ny zava-maniry. Efa vita izany matoa tonga eny am-pelatanana ny CVO. Faharoa dia ny andrana amin’ny vatan'olona ijerena ny mety ho fomba fiasan'ilay akora azo avy amin'ny zava-maniry sy ny mety tsy haharotika ao anatiny. Efa misy ny fikarohana teo anivon'ny laboratoara sy ny andrana tamin'ny olombelona ary mbola mitohy avokoa. Fahatelo ny fangatahana fahazoan-dalana mametraka azy an-tsenam-bahoaka (AMM). Mbola tsy azo izy io satria tsy mbola nanaiky nilaza ny anaran'ireo zava-maniry roa mandrafitra ny CVO ny tompon'ny fikarohana. Raha mbola tsy mivoaka izay anarana izay dia tsy ho azo mihitsy ny AMM kanefa ny fanjakana dia nanome alalana vonjimaika hahafahana mivarotra ny CVO, hoy izy. Ny dingana fahaefatra dia ny fiarovana ny zo fiandoan-tompo-mananaara-tsaina na ny “droit de la propriété intellectuelle”. Hatreto aloha dia ny IMRA no tompony any anaty taratasy ofisialy. Mila vola betsaka kokoa ny fiarovana izany maneran-tany. Mazana dia manantena tamberim-bola amin'ny varotra matoa miaro. Raha voapetraka ny AMM sy ny “brevet” na ny “droit de la propriété intellectuelle” dia tsy misy afenina intsony ny momba ilay zavamaniry mandrafitra ilay vokatra ary azon'ny rehetra eran-tany jerena izany.